Mareykanka oo ku hanjabay inuu dhuunta qabanayo dowladda Soomaaliya! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladda Mareykanka ayaa ugu hanjabatay madaxda dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iney ka jari doonto dhaqaalaha ay siido dowladda haddii aan la xallin khilkaafak u dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh iyo R/wasaare C/weli Sheekh Axmed, sidaas waxaa AFP u sheegay sarkaal sare oo Soomaali ah oo magiciisa qariyey.
Sarkaalkaan ayaa sheegay in Ergayga Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James P. McAnulty uu arrintaas u sheegay madaxda Soomaaliya.
Safaaradda Mareykanku ku leeyahay dalka Kenya ayaa diiday iney ka hadsho hanjabaadda la sheegay iney ka timid Mareykanka ee dhaqaalaha looga jarayo dowladda Soomaaliya.
Mareykanka ayaa la sheegay inuu $58 dollar ku bixiyey arrimaha horumarinta Soomaaliya, sidoo kalalana $271 million dollar ku bixiyey dhisamaha milateriga Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM.
Washington ayaa horay u shaacisay ineysan ka qeybgeli doonin shirka heer sare ah oo 19-20-ka bishaan ka dhacay dalka Denmark, loogana hadlayo arrimaha Soomaaliya, iyadoo taas sabab uga dhigtay khilaafka madaxda dowladda.
Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub ayaa horay walaac uga muujiyey khilaafka soo kala dhex galay madaxweyne Xasan iyo R/wasaare Cabdiweli, kaasoo hakiyey shaqadii dowladda.